China DYT Clip-on Scope Thermal N32-384 Ukwenziwa kunye nefektri | UDianyang
infrared ephathekayo ngesandla thermal camera
Ibhodi yesekethe yebhodi yesekethe yokuhlaziya okushushu
I-infrared thermal imaging camerra yomzimba womntu
Imodyuli ye-infrared thermal
Ubume be-infrared thermal Scope
enye ikhamera yokujonga ubushushu
I-DYT Clip-on Scope Thermal ...
Uhlobo lwe-256 infrared thermal c ...
CA10 ibhodi yesekethe ther ...
I-DP-32 ye-infrared Thermal Imag ...
I-DR-23 ye-infrared thermal imag ...
I-DYT Clip-kwi-Therope Scope N32-384
Nabani na, naphi na, nangaliphi na ixesha, enye yadubula zero, ngomzuzu omnye.
Akukho mncedisi uyafuneka, akukho zixhobo zifunekayo, konke kwenziwe ngumdubuli. Akusekho nkunkuma yeembumbulu, ixesha kunye nemfuno yamava.
Umsebenzi osisikroli esiqhotyoshelweyo
Umsebenzi omnye wemenyu yokuskrolela wenze ulawulo lomda wobushushu ngokulula. Unokusebenzisa iyunithi eneiglavu. Kwisikhokelo sokusebenza kwemenyu siya kukunceda ukhethe ukhetho olufanelekileyo ngalo lonke ixesha, ke, phumla uze udubule.
Ukuyila kwe-DYT yoyilo.
Ukudubula kwezemidlalo-Ukuzingela-Ukulinganisa i-Thermal yokulinganisa-ukuKhangela kunye noKuhlangula-Umkhosi, unyanzeliso-mthetho kunye nothintelo lobhubhane kwezonyango njl.
I-Hunter's Edge, iZero yokuqala yeZenzekelayo.
Ukusebenza ngokufanelekileyo kwabathengi:
Sihlala sigxile kwiimfuno zabathengi. Ubukrelekrele bethu bokuQala kunye neFotot-Shot Auto Zeroing iya kuguqula ngokukhawuleza Nawuphi na umntu abe ngu-sharpshooter osebenzayo, naphina, nangaliphi na ixesha. Itekhnoloji yethu yokuqala yeZero isombulula zonke iingxaki zompu.
Itekhnoloji ye-smart ekwenza ube yingcali
Guqula i-shooter ephakathi ibe yindoda esebenzayo
Iimfuno zakho ziqhubela ubuchule bethu kuluhlu lweemveliso ezinobungcali nolusebenzayo.
Ukusebenziseka lula, kwemeko ezigabadeleyo
Indlu ye-aluminium yezindlu zenqwelomoya idibanisa ukusebenza ngokulula kunye namandla, ubuhle kunye nokuqina kuyilo olumbeneyo, olunobunzima. Ingubo e-hard-anodised ibonelela ngomtsalane, ukukhululeka simahla, umphezulu onganyangekiyo ngamachiza ekulula ukuwugcina.
Onke amacandelo kububanzi, kubandakanya ibhetri, ayile ngokungqinelana nemigangatho ye-IP67, ukuthembeka okuphezulu kunye namandla esakhiwo aqinisekisa ukusebenza okungenasiphako phantsi kweemeko ezigqithileyo zokusingqongileyo ukusuka -40 ukuya ku-50 ℃. Uyilo olungena manzi ngokupheleleyo luphatha zonke iimeko zokusebenza, nokuba ukubonwa kwesixhobo eshushu kubonisiwe emanzini ixesha elide.
Uguqula i-shooter ephakathi ibe yindoda esebenzayo
Ukuphuhliswa okuqhutywa yimfuno, ukuhambisa iimveliso ezifanelekileyo ngenjongo.
Izisombululo ezikrelekrele, umgangatho omkhulu womfanekiso kunye nokuthembeka kukhokelela kukuzithemba kwabathengi
kunye nesiseko sabathengi esiphindayo.
Ukusuka kwinqanaba lokuqonda uyilo, iprototype yohlobo olushushu lwaphuhliswa ngokukhawuleza kwaye
kuvavanywa phantsi kweemeko ezahlukeneyo zemo engqongileyo. Isiseko sedatha ye
ukusebenza kwecandelo eliphambili kuphuculo lwesoftware evule indlela eya
Ukuthengiswa kwemveliso kunye nolawulo.
Umfanekiso ongcono, ukuSebenzisa ngokuSebenzayo
Ixabiso leMveliso ligwetywe ngamaZandla oMsebenzisi wokuGqibela ngamava
Asithembisi nantoni na, ngaphandle kokuba ulwaneliseko luqinisekisiwe. Ngaphandle kokulalanisa, sifuna amava angcono omsebenzisi. Ingcali, iqela lehlabathi elinikezelweyo ekwenzeni isigqibo esifanelekileyo.
Ukuphuculwa kweenkcukacha zomfanekiso
Ukuqhutywa ngokukuko kweefreyimu zemifanekiso yeRAW, 'isakhelo esinengcaciso esineenkcukacha kunye noxinzelelo' esekwe ekuqondeni indawo kunye nokuphuculwa kokuchongwa kwethagethi.
Inombolo yomzekelo N32-384
Uhlobo loluvo VOx engapholiweyo
Isisombululo seSensor 384 × 288
IPiksel Pitch 17μm
Ukuphendula ubude bamaza I-8um-14um
Ubume besakhelo 50Hz
Iilensi zeenjongo 35mm F1.0
Imodi yokugxila Ukujolisa kwincwadi
I-Angle yokujonga 10.6 ° × 8 °
Uhlobo lokubonisa I-OLED, i-0.39 '', inemibala
Bonisa isisombululo XGA: 1024 × 768
Iphikseli 7.6um × 7.6um
Uluhlu lokuchonga (Ubuntu, 1.8m) 1000m
Umatshini wamehlo (uyazikhethela)
Uhlobo lofakelo Screw ngokudibeneyo
Uhlobo Lwebhetri Uhlobo lwe-CR123A ibhetriⅹ2
Ukunikezelwa kwamandla angaphandle 5V, Uhlobo-C,
Ixesha lokusebenza kwiPakethe yeBhetri Iiyure eziyi-3.
Imilinganiselo 156 × 62 × 65 （mm）
Umgangatho woKhuselo, ikhowudi ye-IP IP66
Ubushushu obuSebenzayo -40 ～ ～ + 50 ℃
Ubushushu bokugcina -50 ℃ ～ + 60 ℃
Imveliso ekumgangatho ophezulu kunye "nomhlobo wobomi bonke"
Inkxaso yeMveliso yoBomi bonke
Asingabo abavelisi bemveliso kuphela, kodwa siliqabane elinyanisekileyo kwishishini ekuqhubeni ulwalamano lobomi kunye nabathengi bethu.
Ngokusebenzisa uyilo olungenakubethwa kunye nokuveliswa okuhle, itekhnoloji yethu ephambili ekhokelayo ibonelela ngokusebenza okungcono.
Egqithileyo Uhlobo lwe-256 yekhamera ye-infrared thermal
Okulandelayo: Imodyuli yokucinga ye-infrared thermal ye-SR-19
I-Shenzhen Dianyang Technology Co, Ltd.
# 618, B iBhloko, Ipaki yeShishini ye-IOT, iShenzhen, China
Ifowuni: (86) 75528505260